I-LOFT + TERRASSE ngemuva kwendunduma! - I-Airbnb
I-LOFT + TERRASSE ngemuva kwendunduma!
Seignosse, Aquitaine, i-France
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Céline
Ithala elikhulu, ifulethi elipholile ehlobo, elishisiswe ebusika nokufinyelela ogwini okungamamitha angama-20 !!
QAPHELA, IMODI YASEBUSIKA IVULELWE TERRACE : amakhushini namapharasoli agciniwe, ngiyabonga!
Ifulethi lami lifana nendlu encane ezimele! Ngena ngethala elikhulu elinefenisha elingu-30m2, ujabulele igumbi lokuhlala elinosofa, itafula lekhofi, ideski kanye ne-hammock, elivulekele ekhishini, amagumbi okulala ama-2 aphezulu phezulu kanye negumbi lokugezela elinendlu yangasese ehlukile. Iphelele ku-42m2.
Ifulethi liyi-duplex, esendaweni efanele ukuhlala ngaphandle kwemoto kusukela ngo-Ephreli kuya ku-Okthoba, linemoto unyaka wonke :)
Amamitha angu-20, indlela yendunduma ikuholela ngqo ogwini!
Esitezi esiphansi, ukufinyelela kuzimele njengendlu futhi kunikeza ithala elikhulu elingu-30 m2, elifakwe ifenisha yasengadini kanye nama-cushions amakhulu, itafula lepikiniki "lesitayela" sokhuni lesidlo sakho sasemini. , i-parasol enkulu kanye noseyili womthunzi, isihlalo sedekhi, izitshalo, ishawa yangaphandle, i-plancha kanye ne-garland !! (Ebusika konke lokhu kucocekile kodwa onakho uma kunesidingo!)
Ngaphakathi, esitezi esiphansi, sithola igumbi elikhulu elinosofa othokomele onezihlalo ezimbili, itafula lekhofi eligingqikayo, izihlalo ezincane zokudlela endlini esimweni sezulu esibi.
Bathandi bomculo, nginishiyela isipikha se-Bose esitholakalayo!
Uzothola nedeski ozosebenza ngokuthula kanye nopiyano kusukela ngo-1920 ngakolunye uhlangothi oluntekenteke kakhulu ukuthi "lungadlalwa".
Faka i-hammock enocezu olu-1 phakathi negumbi lokuhlala ngemizuzwana emi-5 ukuze uthole isihlwathi esipholile!
Phezulu, uzothola amagumbi okulala ama-2 amahle akhanyayo ngaphansi kophahla, anama-skylights (kanye namakhethini amnyama ebusuku!). Umbhede ophindwe kabili ekamelweni ngalinye (140cm), isitoreji ... nezinye izitshalo! Elinye lamakamelo okulala angaphezulu alinaso isicabha kodwa liyikhethini elikhishwayo ukuze libe yimfihlo.
Ifulethi liyikhaya lami unyaka wonke ngakho uzothola konke ozokudinga ukuze uhlale ngokuphelele kunoma iyiphi isizini. Kuphole ehlobo, kushisiswe ebusika!
Ku-perimeter eqondile singathola ipaki lokudlala lezingane, inkambo yezemidlalo, iqhugwane ogwini ukusuka ekhefi encane ekuseni ukuya endaweni yokulala, elinye iqhugwane lezifundo ze-surf, zonke izitolo eziseduze (3 'ngebhayisikili, 10' ngezinyawo!) ngisho nepaki elihle ehlathini elikhulu!
1 i-yoga mat kanye ne-floor mat engu-1
I-hammock engu-1 (ngaphakathi, engaphandle ayisatholakali)
1 isambulela kanye ne-windbreaker engu-1 ongaziyisa olwandle
1 blender nezinongo
1 isicoci se-vacuum ngesandla
1 umshini wokuwasha
Futhi ngokuqinisekile uxhumano lwe-WIFI!
I-FAQ: yebo amashidi namathawula azokulinda emibhedeni;)
ubusuku obungu-7 e- Seignosse
Ubhishi ngemva kwendunduma... 1 iminithi kude :) Indlu ibheke indunduma! Indawo yokudlela / bha "Amakhanda" eduze kakhulu, izitolo zokudla nezinto ezilula 10' uma uhamba ngezinyawo, izindawo ezihamba phambili zokusefa ngaphambili, isikole sokuntweza yonke indawo kanye nezindawo zokupaka ezinkulu ezizoba zen!
Ngizotholakala ngokuphelele ukuphatha noma yimuphi umbuzo noma inkinga engingayixazulula!
Hlola ezinye izinketho ezise- Seignosse namaphethelo